QURXINTA – RB Decor
Rinjiyeynta & Qurxinta Guriga
Qurxinta RB Waxay siisay qurxin degaan qurxan tobanaan sano. Sumcaddeena kuma guuleysan iyadoo loo marayo feejignaanteena buuxda ee faahfaahinta Heer kasta oo shaqada ah iyo tayada tayada leh ee ku saabsan Mashruuca Waxaan Leenahay Xaqiiqdii, ma jirto shaqo dhammaystiran oo waxay ku hadlaysaa hubinteeda mid ka mid ah kuwa la oggolaaday ee Kormeerayaasha Qurxinta ah.
Rinjiyeynta Gudaha & Qurxinta
Rinjiyeynta Degaanka iyo Qurxinta ayaa ah adeegeena asaasiga ah, waxaanan leenahay Khibrad sannado badan ah. Dhib malahan xulashooyinka laqancin karo ama qaabka qolka, rinjiyeyaasheenna iyo qurxiyayaasheena waqooyiga si ay uga faa’iideystaan ​​iftiin kasta oo ku faafiya una qurxiya qol kasta mus.
Waxaan u nimid si buuxda u qalabaysan qalabka ugu fiican si loo hubiyo in rinjigaagu si habsami leh oo siman loogu qaybiyo dhammaan dusha. Waxaan u adeegsanaa rollers dhaqameed iyo burush shaqadayada diyaarinta waxay damaanad qaadeysaa natiijooyin waqti dheer soconaya Markasta oo aan dusha rinji marineyno. Dhamaan waraaqaha darbiga ayaa lagu sameeyaa taxaddar weyn si loo hubiyo in dhammaystirka uu yahay heerka ugu sarreeya.
Waxaan u fidinaa Rinjiga iyo Adeegyada Qurxinta bannaanka guryaha guryaha iyo ganacsiga. Waxaan u adeegsanaa rinjiyeyaal tayo sare leh Noocyo kala duwan oo midabbo kala duwan ah, oo soo saaraya saameyn muddo dheer soconaya iyo dareen cusub oo cusub.
Ku haysashada Koodh wanaagsan oo ranji ah, wasakh ama walxaha ilaaliya dusha sare waa Dayactirka Hantida Aasaasiga ah. Intaas waxaa sii dheer, ilaha badankood waxay soo xigtaan in daaweynta rinjiyeynta bannaanka cusub ee wanaagsan ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee aad ka sameyn karto Maalgashi ku diyaarinta guri u diyaarsan qaab ama kaliya si kor loogu qaado muuqaalkiisa guud.